ဆေးရုံသုံး အရည်အသွေးကောင်း Wheel Chair - BaganMart
ဆေးရုံ ဆေးခန်းသုံး Pannel Screen
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 590 view counts
Brand : Yeeshin
Model : WC-001
လုပျငနျးအမညျ : Yee Shin Co.Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-223590, 01-212218
Property : Manual wheelchair
Material : steel chrome plated
Rear wheel : Spoke driving wheel with solid grey tires
Footrest : Fixed legrest
Armrest : Fixed armrest
side panel : steel
Brake system : manual brake
Seat Upholstery : Nylon
ကျွန်တော်တို့ Company မှ အရည်အသွေးမြင့် ဆေးရုံသုံး အထောက်အကူ ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာထဲ စုံစုံလင်လင်ရရှိနေပါပြီ ခင်ဗျာ။ အသေးအမွှားလေးက အစ ခွဲစိတ်ခန်းအထိ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများကို မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးရုံသုံး အထောက်အကူ ပစ္စည်းများထဲမှ အနည်းငယ်ကို တင်ပြမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ယခုပြသထားတဲ့ Wheel Chair ကတော့ လိုချင်တဲ့ အမျိူးအစားအလိုက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အမျိူးအစားပေါ်လိုက်၍ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိပါတယ်။ ယခုပြထားတဲ့ Wheel Chair ကတော့ဆေးရုံ ဆေးခန်း များမှာ အသုံးများတဲ့ အမျိူးအစားလေးပါ။ ဈေးလည်း အတင့်သင့်ရှိပြီး အသုံးပြုရလည်း အဆင်ပြေသောကြောင့် အသုံးများတဲ့ ပစ္စည်းပါ။ အလေးချိန် မစီးပဲ ပေါ့ပါး ခိုင်ခံပြီး အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုပါ။ Break System လည်း စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Yee Shin Medical Division isamarket and customer oriented business division providingaone-stop solution point for healthcare service providers in Myanmar. At our retail outlets, we also provide home care and wellness products for the consumers.
Our team is constantly looking at the needs of our customers and the technology trends driving the market to keep ourselves relevant while striving continuously to improve our service quality to meet rising expectation inastrong and growing economy. We are committed to the healthcare industry and believe in being honest, dedicated and professional in our dealings. We make sure the products we handle are in strict compliance with the country’s regulatory authority.
In the area of modular operating theatres, we haveateam of engineers with proven track records for planning consultation right up to the reliable construction and on-time delivery of the final installations. Laminar air flow units can also be integrated if needed.In addition to constructing modular operating rooms, we supply equipment and consumable for all parts of the hospitals. Below you will find are sample illustrations of our supply scope. Please contact us with details of your need and we will get in touch with you at the earliest opportunity.
For ဆေးရုံသုံး အရည်အသွေးကောင်း Wheel Chair
May I get the quotation for "ဆေးရုံသုံး အရည်အသွေးကောင်း Wheel Chair " ?